Xeebta Biarritz | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Francia, Xeebaha
Mid ka mid ah xeebaha ugu caansan uguna quruxda badan gudaha Francia waa Xeebta Biarritz, oo ku taal Atlantic, oo 32 kiiloomitir u jirta xadka Spain. Xaqiiqdii waad taqaan iyada oo haddii aad ku nooshahay Spain waxaad u tagi kartaa fasax.
Waa hagaag waa xeebta raaxadaBaddu waa qurux badan tahay, laakiin kaliya kuma xirna badda iyo ciidda maxaa yeelay waqti ka dib hareeraha ayaa muhiimad helay oo maanta xeebta iyo magaaladu waxay sameysteen meel dalxiis oo aan loo dhigmin
2 Xeebta Biarritz
3 Maxaa kale oo lagu sameeyaa Biarritz
Waa magaalo ku taal Baay of Bizcaya, xeebta Atlantic ee aagga Pyrenees, koonfur-galbeed Faransiiska. Waxay bilaabatay inay soo ifbaxdo qarniyadii dhexe, qayb ahaan gacanta dhaqdhaqaaqa, nibirigaani wuxuu ka muuqdaa jaakadiisa gacmaha.
Biarritz waxay ahayd magaalo deked badda leh oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ilaa XNUMXaadLaakiin qarnigii xigay waxay bilaabeen inay kahadlaan sifooyinka bogsashada ee hawada badda iyo nasiibka magaalada waligiis wuu isbadalay.
Inta lagu jiro Qarnigii XIX dalxiiskii ugu horreeyay ayaa bilaabmaya, iyagoo gacanta ku haya fasalka warshadaha ee bourgeois ee soo ifbaxaya iyo dadka sharafta leh, in badan oo ka mid ahna waxay halkan u yimaadeen iyagoo doonaya inay daweeyaan xanuunadooda. Qaarkood waxay yiraahdaan caan ayaa si rasmi ah u siiyay Victor Hugo agagaarka 1843, isaga oo ugu magacaabay mid ka mid ah shaqadiisa.
Biarritz ayaa markaa bilawday inay maal gashato muuqaalkeeda ubaxyo iyo geedo badanna waxaa lagu beeray buuraleyda bacaadka ah, dhismaha difaaca ee jaranjarooyinka iyo jiingadaha waa laga tegey bartamihii qarnigii XNUMXaad. Empress Eugenie, afadii Napoleon III, ayaa dhistay qasrigeeda, Furitaanka albaabada booqashooyinka ka yimaada boqortooyada Yurub. Kadib waxaa yimid casino iyo maalqabeeno Mareykan ah, laakiin taasi waxay ahaan laheyd qarnigii XNUMXaad.
Maanta, dalxiiska fayoobaanta waxaa badanaa ku soo biira dalxiis firfircoon, isboorti, sidaas darteed Biarritz waa mid caan ah. Xeebta waa lix kilomitir ka dibna waa laga hadli karaa toddobo xeebo, in ka badan hal keliya.
Mabda 'ahaan, waa inaan ka hadalno waxa ku saabsan Playa Grande de Biarritz, oo leh 450 mitir ciid iyo weyn ee fuula. On boardwalk ee wada dhererka xeebta oo dhan waxaa jira makhaayado kalluun iyo badda, barkadda dabaasha, casino iyo spa. Run ahaantii way badan yihiin xarumaha spa kuwaas oo bixiya daaweynta dhoobada, biyaha badda iyo waxyaabo kale oo badan.
Xeebtan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Empress Beach maxaa yeelay halkan waxaa ku taal Empress Eugenia oo dhistay qasrigeeda, aakhirkiina isu beddelay hudheel Hotel de Palais. Xuquuqda halkan waa halka jeer ka dib fuulitaanku wuxuu ku dhashay Yurub.
Waxay ahayd 1956 markii qoraaga filimka Peter Viertel uu uyimid duubista filimkiisa Qorraxduna way soo baxdaa, oo ku saleysan buugga caanka ah ee Hemminway. Soo saare Zanuck ayaa la yimid halkaasna waa halkii ay wax walba ka bilaabmeen maxaa yeelay Zanuck wuxuu ahaa qof jecel inuu fuulo hawada sare.
Sannad ka dib, asxaabta qaar, wuxuu aasaasay naadigii ugu horreeyay ee reer Yurub, Waikiki Surf Club. Tan iyo waagaas xeebtaan iyo xeebta Basque waxay ahaayeen goobo lagu ciyaaro horyaallo iyo dabaaldegyo badan. Sida iska cad, xitaa maanta waxaa jira iskuulo dul mara haddii ay dhacdo inaadan aqoon oo aad rabto inaad bilowdo.
La Milady waa xeeb kale, weyn, aad loo jecel yahay u dhexeeya dhalinyarada iyo dadka deegaanka. Waad ku dhex socon kartaa socodkeeda oo waxaad ku raaxeysan kartaa aragtida, aad u fiican, sidoo kale waxay leedahay aag loogu talagalay carruurta. Sidoo kale xeebtaan waxaa loogu talagalay dadka naafada ah. Dabcan, markay kacsantahay waa qatar. Gawaarida la dhigto waa lacag la’aan, waxaa ku yaal iskuulo dabaasha iyo makhaayado.
Côte des Basques waa mid aad u fudud kana faa'iideysta astaamihiisa (waxaa ku xeeran buuro dhaadheer iyo waxaad arki kartaa xeebta isbaanishka iyo buuraheeda). Dabaasha mowjadaha sare waa ka mamnuuc xeebna ma leh. Waad dhigan kartaa gaarigaaga xaga sare ee dhagaxa halkaasoo aad uga degto lug ama bas yar oo bilaash ah, xilliga xagaaga. Waqtigaan sidoo kale waxaa jira amni illaa 6, 7:30 galabnimo.
Port Vieux waa xeeb yar oo xasilloon taas oo saaran dhagxaan dhagax leh oo laga ilaaliyo dabaysha iyo hirarka. Waxay u dhowdahay bartamaha magaalada waana sababta waxay ku habboon tahay qoysaska carruurta leh. Biyaha badiyaa waa kuwo deggan oo ku wanaagsan dabaasha. Waxaa laga soo maraa Canon Rock iyo Boucalot Rock, in kasta oo ay tahay tan dambe waxaad ku mari kartaa doonyo iyo skis skis. Ma aadi kartid kalluumeysiga biyaha hoostiisa in ka badan 150 mitir xeebta.
Wadada waxaa ku yaal meel gawaarida la dhigto oo bilaash ah xilliga qaboobaha, oo la bixiyo xagaaga. Meel u dhow waa meel baabuurta la dhigto oo dhulka hoostiisa ah, sidoo kale. Waxaa xarunta ku yaal bas yar oo bilaash ah kaas oo halkaan kaaga tagaya, soconaya inta u dhexeysa 10-ka subaxnimo ilaa 7-da fiidnimo, dukaamada kafeega, dhowr naadi oo lagu quusto, iyo saddex naadi oo dabaasha ah. Laakiin iska jir, waa xeeb meesha sigaar lama ogola: Plage san tabac.
Xeebta Miramar waxay caan ku tahay dadka deggan maxaa yeelay waa xeeb qurux badan oo deggan. Dadka badankood waxay u yimaadaan tamashleyn, in kasta oo aad sidoo kale tegi karto fuulitaanka iyo fuulitaanka jirka. Meel u dhow waxaa jira meel gawaarida la dhigto oo dhulka hoostiisa ah, haddiiba ay dhacdo in baabuur yimaado.
Marbella Waa xeeb kale oo qurux badan, the kordhinta Côte des Basque. Aad baa looga qadariyaa badmaaxayaasha, in kasta oo dadka naafada ah ay leeyihiin murugo maxaa yeelay waxaa jira dhagaxyo iyo jaranjarooyin. Waxaad halkaas ku imaan kartaa bas, waxaa jira nabadgelyo xagaaga, waxay leedahay iskuulo dabaasha iyo dukaamo kiro qalab iyo maqaaxi / makhaayad.
Maxaa kale oo lagu sameeyaa Biarritz
Xeebaha ka baxsan, qofku wuu samayn karaa wax badan. Tusaale ahaan, haddii aan raacno carruur marka lagu daro hudheelada leh waxqabadyada iyaga loogu talagalay, waxaa jira Matxafka Badda iyada oo in ka badan 150 nooc oo badda ah ay iyagu ogaadaan, ku jira quraarad.
Biarritz waxaa ku yaal khasnadaha dhismaha oo ay ka mid yihiin Kaniisadda St. Martin laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ama Kaniisada Orthodox ee Ruushka. a ku soco jidka lagu socdo Waa waajib, in la arko quruxda Hôtel du Palais, qasrigii hore, ama quruxda badan Dhig Ste Eugenie.
Waxaad sidoo kale ku mari kartaa socod gastronomic ah Suuqa Halle ama Suuqa Les Halles, in la isku dayo wax walba ama la iibsado alaabada gobolka: farmaajo, midka caadiga ah biibiile, Montagne malab ... Sidoo kale waa meel wanaagsan oo lagu isku day kalluunka iyo cuntada badda oo leh jajab, mid ka mid ah makhaayadeeda, in kastoo in badan oo ka mid ahi qaali yihiin, ama qalfoof ama pintxo, Rue des Halles oo mashquul badan.
Iyo aragtida ugu fiican Waxaa bixiya guddiga, laydhka leh barxaddiisa, oo aad hadhow uga socon karto Côte des Basques, ama makhaayadda Isaga oo ku baaraya bixinta, qorrax dhac walba, meesha ugu fiican ee lagu raaxeysto kaarka boostada oo ay ku jiraan galaas khamri Faransiis ah oo gacanta ku jira.
Marka ay timaado sameynta waxyar, waad awoodaa booqo meelaha ku dhow dhow ee Saint Jean De Luz iyo Cibourne, oo leh dhismayaal soo jiidasho leh, deked kalluumeysi, webi iyo midabbo badan. Qaab dhismeedka caadiga ah ee 'Basque' ee Cibourne waa mid soo jiidasho leh isla markaana waxaa loo dhihi karaa xeebta Saint Jean De Luz, haddii aad rabto inaad ka baxsato dalxiiska weyn ee Biarritz.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Francia » Xeebta Biarritz
Dharka dhaqameed ee Ruushka